Idzivirirwa Ne Semalt: Kushandiswa Kwekunyengera kweIndaneti
Kune maitiro akasiyana-siyana umo unyengeri hunoitwa pawebhu. The Securities andExchange Commission inoratidza huwandu hwemhando dzekunyengedza kwekambani pawebsite yavo. Lisa Mitchell, Mutengi weKuteresi Achibudirira Semalt ,yakurukura muchidimbu zvimwe zvekuti iwe udzivirirwe kubva pakurwiswa kwepaIndaneti.
Ndiyo nzira iyo makambani ekutengesa vatengesi vanosangana nevatengi kuburikidza nefonikuvanyengetedza kuti vashandise mune imwe nzvimbo. Yakakonzerawo vanyengeri vanoshandisa mabhuku ehurukuro kune varairi vaine chinangwa chogawekubata - commercial fishing boat value.
Kunosanganisira kutumira maimeri kune vanhu vasina kukwana vanoratidza kuti iwe unogona kuwanapfuma yakawanda neine zvishoma. Iyo yakakurumbira ndeyeNigeria yenhema iyo email inonzi inobva kune mumwe munhu ari kutambudzika inodarubatsiro rwako kuti ufunge mamwe mari muakaunti yako. Uyu mutengesi anoratidza kushandisa bhadha yako yebhangi kuti uwedzere mari, iyo nenzira chaiyo,chinangwa chavo ndechekukubiridzira pamabhadharo ematare uye mitero. Iwe unofanirwa kupinda mumusungo waro, iwe ucharasikirwa nemari yepamusoro.
Izvi zvinoitika kuburikidza nekuedza kwekubatana kwepepanhau rekunyora vanyori nekutsvagamakambani. Makambani ekubhadhara mari anobhadhara ava vanyori kuitira kuti vakwanise kunyora ruzivo runofarira kuisa mune imwe kambani.Uyezve, havatauri kuti vari kubhadharwa nekuda kwekurudziro. Izvi zvinoumba ruzivo rwakanyanyisa ruzivo rwekuda marianotora kusava nehanya paanoita zvisarudzo zvekutsvaga.
Izvi zvinosanganisira mabhizimisi ekutengeserana. Zvizhinji, zvinowanikwa nenzira ina.Kutanga, mutengesi anotora mari yose kuvatengi asi haasati aendesa zvigadzirwa zvachose. Nzira yechipiri ndiyo iyo mutengesi anopa chigadzirwaiyo kukosha kwayo kunopfuura kudarika imwe inoshandiswa imwe. Muchiitiko ichi, anopa ruzivo rwakashata pamusoro pechigadzirwa nechinangwa chokukwezva vamwe vatengi. Themutengi anoguma achibhadhara zvimwe. Nzira yechitatu inosanganisira kureva nhema pamusoro penguva yekuendesa. Mutengesi ndiye anopa mushure mekuratidzwa. Pakupedzisira, amutengesi angakundikana kuita kuti kuzivikanwa kwekutsvaga ruzivo kunogona kuchinja chisarudzo chemutengesi.
Federal Trade Commission uye Auction Fraud
Izvi zvinosanganisira vatengesi vakaipa vanotengesa mabhizimisi pane chigadzirwa chemutengesishandisa mutengo wepamusoro, kudai kuendesa kune dzimwe mabhizimusi ipapo kubvisa mabhizimusi kuti uwane chigadzirwa pamutengo wakaderera uye pakupedzisira ureve nhemakune vanotengesa kuti vanogona kutenga zvigadzirwa zvakashambadzirwa pazvivako zvepamutemo pamutengo wakaderera kunze kwepuratifomu. Apo pavanotevera vanokanganisa,ivo vanoguma vachibatwa.
Tsanangudzo yemunhu wacho inoshandiswa kuwana zvinhu zvinokosha zvakadai sekutyairamalayisensi uye makadhi emakadhi. Zvose zvikwereti zvinowanikwa zvinozobhadharwa nemunhu anenge atambudzwa uye mhosva dzomumigwagwa dzakaitwa dzinonyorwa mumunhu wachonhoroondo. Munhu wacho anongotanga kuziva apo paanoyeuchidzwa kuti vanonoka kubhadhara mari yavo.
Anopikisa anoita kuti munhu anenge atambudzwa ape ruzivo rwomunhu ogakuburikidza nokuzvifananidza kuva chikamu chepamutemo icho munhu wacho akazviziva, saizvo, bhangi.
Izvi zvinosanganisira kutyisidzira munhu pakombiyuta. Inogona kuitwakuburikidza nokushandiswa kwemaeilin, internet kana zvimwe zvinoreva magetsi.